Amathiphu wokulawula ukuchitheka ezinjeni Amathiphu wokulawula ukuchitheka ezinjeni | Izinja Umhlaba
Amathiphu wokulawula ukuchitheka ezinjeni
Kujwayelekile ukuthi izinja zikhiphe obunye uboya bazo, noma kunjalo,zingakanani izinwele okufanele bazilahle ukuze bazi ukuthi ziningi kakhulu?
Iningi lezinja likhipha uboya bazo, ikakhulukazi phakathi nezinyanga ezishisayo zasehlobo, noma kunjalo inja elahlekelwa izinwele ngobuningi ingaba nento ebucayi kakhulu ngemuva njengokungezwani nezinto ezithile komzimba, ukungalingani kwamahomoni, izibungu, ukuhlukumezeka noma izifo.
Yize kuyinto ejwayelekile ukuthi iningi lalezi zilwane likhiphe izinwele ngesikhathi esithile sonyaka, uma iziqubu ezinkulu zoboya obuthuntu zichitheka kalula noma uma ijazi lenja selincipha lize lifike ezingeni lokuthi likwazi ukubona isikhumba salo, lokhu kusho ukuthi inani lezinwele elikhishwa inja lingeqile futhi unenkinga.
Inja elahlekelwa izinwele ingaqala isimo esibi, yize lokhu kungenzeki ngaso sonke isikhathi, empeleni, ukulahleka kwezinwele eziningi ezinjeni kwenzeka ngenxa yezimo ukuthi ingelashwa. Izimbangela ezivame kakhulu ukungezwani komzimba nokungezwani, ukungezwani komzimba namakhemikhali, kanye nokwaliwa ukudla.
Endabeni yokungezwani komzimba, ukulahleka kwezinwele kudalwa amanxeba isilwane uqobo lwaso.
1 Izimbangela zokulahleka kwejazi ezinjeni
2 Ukungalingani kweHormonal
3 Ukwelashwa kokulahlekelwa izinwele ezinjeni
3.2 Shintsha ukudla kwenja
3.3 Thola ukwelashwa kwe-hormonal
3.4 Usebenzisa ama-hydrocortisone shampoo nama-sprays
Izimbangela zokulahleka kwejazi ezinjeni
Ukulahleka kwengubo yenja kungenzeka ngezizathu ezahlukahlukene, lezi ngezinye zazo:
Ezinye izibungu zibhekene notwayi. Lokhu kungalimaza isikhumba senja futhi kuholele ekulahlekelweni izinwele. Utwayi kubangela ukuxebuka kwesikhumba, okwenza inja iklwebhe ngokweqile.
Ukulahleka kwezinwele okubangelwa ukuhlukumezeka kwenzeka kaningi futhi kungumphumela we inja engalapheki ikhotha esikhunjeni sayo.
Lesi simo, esaziwa nge-acral lick dermatitis, silimaza i-follicle yezinwele futhi siholele ekulahlekelweni izinwele. Ukuhlukumezeka kungenzeka futhi njenge- ukusabela kwesibili ekulimaleni.
Izinja ingahle iguliswe ngokuqinisekile ukudla, kanye namazeze. Izinhlobo ezithile zezinja zisengozini yokungezwani komzimba nezinye, njengeGolden Retrievers, iBulldogs, neYorkshire Terriers.
Ukulahleka kwengubo ngenxa yokungezwani komzimba, kubangela ukubomvu esikhunjeni, ukulunywa nokuvela kwezigaxa kuwo.
Ukutheleleka okuhlukile kungadala ukonakala kwengubo yenja, kufaka phakathi folliculitis futhi cáncer. Kulokhu, kungenzeka kakhulu ukuthi sizobona izigaxa ezine-pus noma ngaphandle kwe-pus, ukukala nokubomvu.
Ukungalingani okuningi kwamahomoni kungadala ukonakala kwezinja ezinjeni. Izinkinga ze-thyroid, i-pituitary dwarfism, ne-adrenal gland defence, zingadala ukulahleka kwezinwele okuqhubekayo.
Ukwelashwa kokulahlekelwa izinwele ezinjeni
Ukwelashwa kwezinja uma kwenzeka ukulahleka kwengubo yazo kancane kuzoya ngesizathu, ngakho-ke okubaluleke kakhulu ukuthi sikwazi ukulawula lesi sifo.
Udokotela wezilwane angakwazi nquma ama-antibiotic ukwelapha noma yikuphi ukutheleleka lokho kubangela ukulahlekelwa izinwele enjeni.
Udokotela wezilwane kungadingeka ukuthi asuse noma yimaphi amaqhuqhuva ahambisanayo noma izicubu ezinomthelela ekuchitheni nasekwelapheni inja ngama-antibiotic, kanye neminye imithi efanelekile yalesi sifo.
Shintsha ukudla kwenja
Uma udokotela wezilwane ecabanga ukuthi ukulahlekelwa yizinja kwenja kudalwa i- ukungezwani komzimba nanoma yikuphi ukudla, lapho-ke kuzodingeka ukuthi sikuqede ukudla okukhulunywa ngakho ekudleni kwakho. Ukwelashwa kokudla okuvame kakhulu ezinjeni kubandakanya ukolweni, ummbila, ubhontshisi, amaqanda, ngisho nenkomo noma inkukhu.
Thola ukwelashwa kwe-hormonal
Uma inja inokungalingani kwamahomoni, izithasiselo zingamisa ukuchitheka kwengubo futhi usize inja yakho ukuvuselela. Abahlengikazi bezilwane bangenza izivivinyo ukuthola ukuthi ukwelashwa kwehomoni kuzosiza ukubhekana nenkinga.
Usebenzisa ama-hydrocortisone shampoo nama-sprays
Ungalapha ukukhotha ngokweqile futhi ukhulule isikhumba esilumayo, uma sigeza inja ngo imoto ethile yezinja equkethe i-hydrocortisone.
I-Hydrocortisone kuthoba isikhumba esicasukile futhi kungasheshisa ukwelashwa.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Izifo » Amathiphu wokulawula ukuchitheka ezinjeni
Ungayithola kanjani inhlonipho yenja
Uhudo ezinjeni ezindala